Ahoana No Fomba Ahazoana Maimaim-Poana Amin'Ny Lightroom - Ampidino Ny Fitsapana Maimaim-Poana An'Ny Lightroom
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Ahoana ny Fomba Ahazoana Maimaim-Poana ny Lightroom
By Ann Young, Mathis Ravatomanga 2022-06-18, Malagasy Blog
Mifanentana: iOS / Android
CC Lightroom maimaim-poana: Mac / Mandresy
Te hahafantatra ny fomba ahazoana maimaimpoana ny Lightroom? Andao hojerentsika ny fomba ara-dalàna 2 momba ny fomba fampidinana maimaim-poana ny Lightroom amin'ny 2022, ary koa ny loza miafina amin'ny piraty ary avereno jerena ireo safidy malalaka Lightroom tsara indrindra.
Tombony azo amin'ny Lightroom maimaim-poana:
Natsangana tamin'ny rafitra fitantanana / fanaovana katalaogy
Fikambanan-tsary mora miaraka amina fanangonana sy galeria
Fanovana tsy manimba izay mitahiry rakitra data
Mora sy haingana ny mandrindra ny dingana fanovana sary
• Afaka miasa amin'ny macOS sy Windows ve ity andrana maimaimpoana Lightroom ity?
JEREO TOKO FITSARANA MAIMAIMPOANA
• Azon'ny mpianatra atao ve ny manantena fihenam-bidy aorian'ny fampiasana andrana maimaim-poana?
Eny, ny mpianatra, ny mpampianatra ary ny manao hetsika fampianarana dia manan-jo handray fihenam-bidy amin'ny famoronana Creative Cloud. Ity fihenam-bidy ity dia hatramin'ny 60%.
• Ny Fitsarana Lightroom ve no kinova feno amin'ilay programa?
Eny, ity dia kinova feno amin'ny programa, misy fiasa fanovana sary mitovy amin'ilay kinova Lightroom farany.
• Aiza no ahazoako maimaim-poana ny Adobe Lightroom amin'ny findaiko?
Mampalahelo fa amin'ny biraonao ihany no azonao ampiasaina an'ity kinova amin'ny programa ity. Na izany aza, azonao atao ny mahafantatra ny lisitr'ireo vokatra finday an'ny Adobe ao amin'ny tranonkalany.
SINTOMY MAIMAIMPOANA MAFY MAZAVA
• Ahoana ny fomba ahazoana maimaim-poana ny Lightroom nefa tsy misoratra anarana amin'ny Creative Cloud?
Mampalahelo fa tsy azo atao izany. Ankehitriny misy ny vokatra Adobe tsy misy afa-tsy amin'ny fidirana ao amin'ny Creative Cloud, ao anatin'izany ny Lightroom. Ny mpampiasa tsirairay dia afaka misafidy ny famandrihany manokana, izay misy Lightroom na fampiharana hafa.
Misy karazana famandrihana isan-karazany, manomboka amin'ny famandrihana ho an'ny mpianatra, mpampianatra, olona tsirairay ary mpandraharaha hatramin'ny drafitra manokana ho an'ny mpaka sary sy andrim-panjakana.
JEREO NY DRAFITRA FANORATANA
Fomba iray hafa hampiasana Adobe Lightroom Free
Ny mpampiasa rehetra izao dia afaka maimaim-poana sy maimaim-poana amin'ny fisintomana ny kinova finday Lightroom. Mila misintona Lightroom CC maimaim-poana fotsiny ianao avy amin'ny App Store na Google Play.
LR MOBILE MAIMAIMPOANA
Preset finday Lightroom
Tsy afaka misafidy ny handrindra raha tsy amin'ny Wi-Fi
Fitaovana fototra fanitsiana loko
Azonao atao ny mampiasa ny rindranasa finday tsy misy fisoratana anarana sy maha-mpikambana ao amin'ny Creative Cloud, fa ny boatinao rahona kosa tsy ho azo ampifanarahana amin'ny fitaovana hafa.
Na izany aza, voatahiry avokoa ireo fiasa, fitaovana ary fanovana sary hafa rehetra. Ny programa dia miasa amin'ny fomba mitovy amin'ny birao Lightroom CC.
Hijery misimisy kokoa momba ny toerana hisintomana Adobe Lightroom torrent.
Tsy fahatokisan-tena amin'ny fampiasana Pirated Lightroom Version
Mampalahelo fa ankehitriny dia misy loza mitatao maro izay mety ho lasa tena zava-misy ianao raha mampiasa kinova piraty amin'ny programa solosaina. Tsy izy rehetra no miharihary, noho izany dia maneho loza mitatao izy ireo.
Voasazy araka ny lalàna izany, satria tsy ara-dalàna
Hanaja ny zon'ny hafa raha tsy izany dia hataon'ny lalàna fa manaja azy ireo amin'ny fomba mahery ianao. Ny sazy amin'ny fampiasana programa piraty dia manomboka amin'ny $ 1.500.
Hadinoy ny fanohanan'ny mpanjifa
Amin'ny fomba fijery voalohany, ny fampiasana maimaimpoana ireo kinova piraty dia mety ho toa manangom-bola mahafinaritra, saingy mieritreritra fa tsy misy olona afaka manamboatra ireo lesoka mitranga rehefa miasa amin'ny rindrambaiko toy izany. Tena tsy azo atokisana izany, indrindra ho an'ireo mpaka sary, izay ananan'i Lightroom fitaovana iray ahazoana vola.
MAIMAIM-POANA NY VERSION MAZAVA MAIMAIMPOANA
Ny iray amin'ireo tombony lehibe amin'ny kinova am-boalohany ny vokatra dia ny fidirana eo noho eo amin'ireo fanavaozana farany. Ny mpanamboatra dia afaka manamboatra lesoka sasany, manampy asa fanampiny ary izany rehetra izany dia tonga ho azy amin'ny kinovan'ny vokatra.
Miaraka amin'ny kopia piraty iray, dia tsy hanana fanavaozana farany ianao, ary ny fanandramana hiditra amin'ny rafitra ofisialy dia mety hitarika sazy lehibe.
Ny safidy ratsy indrindra dia ny fianjeran'ny solosaina
Matetika dia mitranga izany fa ao anaty fonosana misy kopia piraty misy ihany koa ireo rakitra misy viriosy, doka na rindrambaiko manimba hafa izay afaka manamboatra ny kaontinao, manakana ny fidirana amin'ny Internet, mifehy ny browser-nao na, ny ratsy indrindra dia manimba ny solosainao ao amin'ny ambaratonga lalina kokoa.
Vakio bebe kokoa momba ny antony tokony hahalalanao tsara kokoa mividy Lightroom.
Safidy 5 azo atokana ho an'ny Lightroom maimaim-poana
Ireo mpampanonta sary nasongadiko teto dia mamela anao hanitsy ny fifanoherana, ny famirapiratana, ny haavony, ny mahasosotra, ny hamafiny ary ny tanjany mba hahatratrarana ny valiny izay noeritreretinao rehefa nitifitra ilay sary ianao.
Izy ireo koa dia manolotra fitaovana amin'ny fanapahana sy ny fihodinan'ny sary, fa raha mitady fitaovana famerenana sary sy fanasitranana borosy ianao dia ampiasao Maimaimpoana Photoshop.
MAMPIASÀ RAWTHERAPEE MAIMAIMPOANA
Fanovana sary tsy manimba
Alefaso amin'ny programa fanovana sary hafa
Ny iraka lehibe ataon'ny RawTherapee dia ny fanitsiana ireo fisie RAW (ary koa ny TIFF sy JPG), arahin'ny fahafaha-mampifandray ilay sary amin'ireo rindrambaiko hafa mifandraika amin'ny fanovana sary fanampiny.
Ho fanampin'izany, fitaovana matianina napetraka no ahafahana manova paramètre marobe, manitsy ny fifandanjana fotsy, manampy famirapiratana ary mamorona vahaolana loko vaovao.
Mora ny mitahiry ireo toerana taloha ho toy ny preset, izay azo ampiasaina amin'ny sary ho avy. Azonao atao ny manodina misaraka ny sary na mampihatra ireo toe-javatra mitovy amin'ireo vondrona sary maromaro indray mandeha.
MAMPIASÀ CHASYS DRAW IES MAIMAIMPOANA
Fanohanana endrika RAW
Fonosina fitaovana fanovana sary
Mety hampisavoritaka ny interface
Ny Chasys Draw IES dia azo ampiasaina tsara amin'ny maha-mpamoaka sary azy ary mamadika rakitra ao anaty tsindry iray ary tsy misy fanomanana fanampiny. Miatrika tanteraka ny andraikitry ny fampiharana amin'ny fakana sary sy horonan-tsary mivantana avy amin'ny solosainao izy io. Azonao atao ny mamorona sary masina, sary mihetsika ary zavatra hafa mahaliana amin'ity programa ity.
Zahao hoe safidy Lightroom maimaim-poana.
MAMPIASÀ LIGHTZONE MAIMAIMPOANA
Fitaovana fifantina avy amin'ny Vector
Mitaky kaonty maimaimpoana
Ny safidy hafa tsara amin'ny Lightroom dia LightZone. Raha te hampidina azy io dia mila manoratra kaonty amin'ny pejy ofisialin'ity programa ity ianao.
Ny endrika lehibe, izay mety amin'ny fampiasana an'ity programa ity dia ny endrika RAW (sy ny analogs). Azonao atao ny manisy sivana fanampiny amin'ny sary, manova ny tonony miloko, milalao ny halalin'ny aloka sy ny lokon'ny teboka maivana. Ankoatr'izay, ny programa dia manana fitaovana vector izay manome anao fampiasa lehibe amin'ny fanovana sary.
Ny interface dia tsy intuitive foana
Fampiasana sy mpanova tena mety. Tsara ny manamarika fa IrfanView dia iray amin'ireo programa maharitra indrindra ato amin'ity lisitra ity, nanomboka ny fampandrosoana 20 taona lasa.
Azonao atao ny mampiasa IrfanView ho tahiry maimaimpoana - ampiana tsy voafetra ny sary, amboary izy ireo, ampio tags, ary koa fanaraha-maso efa namorona tranomboky rakitra.
MAMPIASÀ DAMINION MAIMAIMPOANA
Arovy ny atiny tsy ho simba
Tsy misy Mac fanohanana
Daminion dia mpizara lehibe amin'ny fitehirizana sy fizarana sary. Ity programa ity dia matetika ampiasain'ny vondrona mpamorona sy tonian-dahatsoratra izay miara-miasa. Azonao atao ny mampakatra sy manova sary, ary manome fidirana amin'izany ihany koa ho an'ireo mpampiasa hafa avy amin'ny vondrona misy anao ary afaka miara-miasa hampivelatra ny safidy.
Preset an'ny Lightroom maimaim-poana
Lr Preset maimaim-poana
Raha mampiasa Lightroom Classic CC ianao dia mety fantatrao ny momba ny preset. Ireo no toe-javatra noforonin'ireo retoucher matihanina, izay mety hanova ny sarinao amin'ny tsindry iray monja.
Sintomy Free Lightroom CC
Lr maimaim-poana ho an'ny Mac / Win
Lr maimaim-poana ho an'ny iOS
Lr maimaim-poana ho an'ny Android
Izay mpaka sary mandray anjara amin'ny fanitsiana sary dia mila rindrambaiko manokana hanitsiana ny lokony sy ny fanovana sary manta.
Azonao atao ny mividy ny Lightroom CC, mampiasa fomba ara-dalàna hafa handraisana azy maimaim-poana, manaova fanovana amin'ny programa hafa na azonao atao ny mampiasa serivisy amin'ny serivisy fanovana sary matihanina ary manadino ireo olan'ny fampivoarana sary mihitsy.
Tombontsoa azo avy amin'ny Lightroom
Misintoma Lightroom Free